I-SMARAGD RIVER kufuphi neRastoke kunye nePlitvice Lakes
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDamira
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uDamira iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-Smaragd River Apartment ibekwe phezu komwonyo woMlambo iKorana, ophuma kumachibi ePlitvice. Indawo yokuhlala ikwi-250 m ukusuka kunxweme lwabucala apho kwiinyanga zasehlotyeni unokufumana ukuphumla. Unikezelo lubandakanya ukusetyenziswa simahla kwamaphenyane. Ukuba ungumntu othanda ukuntywila, unokuphonononga ibhedi yomlambo oyisanti yetravertine kwaye ukonwabele ubutyebi obuphantsi kwamanzi. Ummandla utyebile kwimifuno kunye namakhowa. Umoya omtsha kunye nokusingqongileyo okucocekileyo kukumema ukuba uhambe uhambo olude kunye nommandla.
I-Smaragd River Apartment inegumbi lokuhlala, ikhitshi elinegumbi lokutyela, igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela. Umnyango ugutyungelwe nge-canopy yamaplanga apho unokuyonwabela ikofu yakho yasekuseni ukuphumla kwifanitshala yegadi. Ebusuku, ukonwabela iglasi yewayini, unokujonga isibhakabhaka esihle esineenkwenkwezi. Ungasebenzisa ibarbecue yangaphandle egadini emva kwendlu. Kwigumbi lokuhlala unokuchitha ixesha elimnandi umamele umculo kunomathotholo okanye kwi-usb, okanye ubukele iTV yesathelayithi. I-WiFi nayo ibandakanyiwe kunikezelo. Unokulungiselela ukutya okuthandayo ekhitshini, kwaye kwifriji enkulu uya kufumana i-liqueur yasekhaya kunye nebhotile yewayini. Kukho indawo yokucima umlilo kwigumbi lokulala ukuze ukonwabele ukukhanya okuvuthayo komlilo ukuba uyabanda, okanye uvule i-air conditioning ukuba ufuna ukuhlaziya.
Indawo yokutyela eGrand ikumgama ozimitha ezingama-500 kuphela, kwaye babonelela ngokutya okumnandi kwasekhaya, ibhiya, iwayini, okanye ikomityi nje yekofu. Endleleni yakho eya kwiPlitvice Lakes, uya kudibana nedolophu encinci ethandekayo iSlunj, kwaye uqiniseke ukuba uyema eRastoke.
Umbuki zindwendwe ngu- Damira